Endaweni waseshashalazini akusiyo ngokuvamile ukuthi uma isitatimende ukuthatha "Cheers", ke wonke isizini iba yimpumelelo. Ukusebenza "zobugovu" nge Kotlyarskii V, V. Feklenko futhi Bobrov A. - sibonelo esigqamile. Abaculi waqhubeka uhambo ekhonsathini kuleli zwe ukwethula lokhu ahlekisayo kumnandi. Lokho okwagcina ngakho - zama ukuqonda.
Shi ekukhulekeleni izinkinga
"Zobugovu" - hhayi isitatimende sokuqala, futhi esekelwe play by umlando Miki Myullyuaho. Ngqo version waseshashalazini ka "Ngenxa yokwethuka" ingashintshwa eMoscow abalobi, futhi umqondisi wenza uHarold Strelkov.
Yini etha "zobugovu"? Ukusebenza (photo enamathiselwe) isitshela indaba madoda amathathu, abangane kusukela ebuntwaneni. Ba- kahle nomunye, okungakwazi babonakala miss izenzakalo ezibalulekile ezimpilweni yokungcwaba ozakwabo. Lapho omunye izinhlamvu ukuxazulula izinkinga abazalwane ababehlangabezana nazo, omunye ngokushesha axhunyiwe. Kodwa imbangela evame engalethi Imiphumela - nabangane ujabule ophela bethola ukuthi shi ekukhulekeleni izinkinga ngisho mkhulu ...
Yemfashini embule umphefumulo
Umqondo yokujwayela wokuqukethwe ezinjalo play umsuka emva sici amafilimu "Yini Madoda Talk About" futhi "Yiziphi intombazane buthule." Nakanjani, ukutshela mayelana nakho sekuwumkhuba! Abalingiswa posing kwanqunywa ukuba enze abamele nengxenye enamandla. Kungani? Ngoba amadoda akwazi ukusithwala udaba ngokusebenzisa indida, ubugovu, ukuhleka, ezemidlalo, ngisho nokukhala izinyembezi okuningi. Lokho sikwazi ukwenza izinto ezihlukahlukene futhi baphendula play "zobugovu", ukubuyekezwa zazo uqinisekise ukuthi ngobuthakathaka amadoda, futhi, akuzona alien!
Incazelo ngiswa abasemqoka abazizwa
Izinhlamvu eyinhloko "zobugovu" inikeza isithombe lapho zonke izakhamuzi zezwe lethu lesibili kuyobonakala. Lokhu kuphumelela, enokuzethemba kusasa, owawuse umsebenzi womuntu, okuyinto kancane "phezu amathathu". Uthando idrama kushintsha bezibona ukuphila: imibono zibekelwa inselele, futhi izimiso - zokubuyekeza. Indlela Ngithanda ukucabanga ukuthi singabantwana Irreplaceable! Kodwa lokhu kunjalo ngempela?
Inhlanganisela okuphambene typecasting, ubungani olulodwa athishela ihlukanisa ukusebenza "sobugovu;" nge Kotlyarskii. Izibuyekezo wabheka isitatimende wafingqa umbono ukuthi abangane abathathu musa zokuphola cabanga ezimpilweni zabo siqu. Ukubheka TV umethuli owaziwa, intandokazi abesifazane kanye abalandeli izimoto sokunethezeka, uyazi ukuthi impeccability yakhe limane eyayenziwe wadala umbono njengoba umklami imfashini, wazithola guru emkhakheni wezokusebenza kwengqondo, ukhathazeke izinkinga ukuze isikhathi eside nje ukuba ahlale ekhaya.
Kuyini mutual? Lapho namaqhawe ukuthola indlela yokuphuma yalesi simo, edonsa phansi? Enye indlela ephumelelayo - isifiso ukukhuluma kuzinga nge ikhono lokulalela, futhi ikhono lokuthethelela futhi baqonde kuyoba impumuzo enkulu imizwa yecala.
Emakhasini eziningi zokuxhumana nabantu ukudlala abagqugquzeli aliveza ukuvakasha schedule. Kwaphela izinyanga eziningana posing wahambela emakhoneni ezihlukahlukene zezwe. Lapho amathikithi nathengwa ezimbi noma cha sithole inani okungenani ababukeli, umbukiso kwadingeka ukuba yesulwe. Fans of the abadlali phambili bacelwa ukuba labo abaye bamqala, ukuveza imibono. Iningi bonke babengamadoda omuhle.
Ukusebenza sikhunjulwe "zobugovu"? ababukeli lezivakashi babe sithathwe ngokuhlanganyelwa. Lena imizwelo enamandla kakhulu esitatimendeni sakhe, okuyinto kanye nezinhlamvu nabalingisi ophindukuzalwa phambi kwamehlo ethu. Sikhuluma izinguquko ku kwemizwa, lapho abangane abathathu bazi intengo ubuhlobo langempela. Kule ndaba, bonke abaculi zazimangalisa, ngokugcwele liveze obala uhlobo abalingiswa.
Ukuze umsebenzi wakhe esebenza Vladislav Kotlyarskii kudlalwa amabhayisikobho angaphezu kuka-60. Futhi nesithombe esibi ubhekisela omuhle. ababukeli Abaningi bakhumbula uchungechunge yakhe TV "Capercaillie" futhi "Karpov". Futhi manje, banikezwe ukushayelwa athandwa "sobugovu;", bayazi kuhle kanjani isigaba umlingisi.
Kotlyarskii, ngokuvumelana izibukeli, senzeka ukukhiqizwa phambili. Manje-ke kunzima ukucabanga omunye umuntu, futhi bambalwa abantu bazi ukuthi Vladislav lokuqala engafuni ukwamukela indima. Wayematasa kumaphrojekthi ithelevishini. Kodwa namanje wanika imvume ukusebenza "sobugovu;".
Abalingisi Alexander Bobrov futhi uVladimir Feklenko - izinkanyezi abasha ngokwanele, kodwa babengenaso isikhathi akuveza athi angama. Ngohlelo yabo babukhanya - abayikho abomdabu of amazwe ehlukene (Russia nase-Ukraine), futhi ngayinye kuwo kuletha kuhlamvu wombala engasenathonya. Vladislav bebona nabo abaphezulu. Naye abazijwayele isikhathi eside, kudlalwa ndawonye chungechunge.
Ukusebenza "zobugovu" nge Kotlyarskii, Bobrov futhi Feklenko - umlando, kwenza nathi cabanga ezimpilweni zabo siqu. Naphezu kalula okuqonda, khona amahlaya izigcawu amahlaya, ke ongaqhubeki ukuzijabulisa focus. Indlela enhle kuwo ahlanganisiwe ubuqiniso elisabisayo okubangela izinyembezi okukhulu. Njengoba avuma wabheka ukudlala, it is ngokulinganayo yakhelwe nabesifazane, amadoda, ezikwazi ukuhlaba zingene imizwa ubani.
inkinga yokukhula - the "isidlo" esemqoka, alinikela izilaleli play "zobugovu" nge Kotlyarskii. Izibuyekezo ubilise phansi yokuthi nabalingisi phambili ayekwazi ukubonisa kakhulu ukuthi crisis. Ngaphezu kwalokho, ukuthola isizathu okufanele siqhubeke siqala nge eyeqisayo kokushintsha.
Ngokwe abadlali ngokwabo, inkinga yokukhula, isici bobubili ubulili, kukhona empeleni. Ngakho, Vladislav Kotlyarskii ngasinda kuye, ikhanda lakhe elahlekile emsebenzini. Ezinye izindaba zika-abalingisi, ngakolunye uhlangothi, waqaphela ukuthi le nkathi, naphezu "abasha" yabo yobudala, wanikezwa kubo esinzima ngokwengeziwe. Alexander Bobrov wazizwa ushintsho konke, ngisho nesifiso ukuyeka ukubhema. UVladimir Feklenko bayichezukisa ukuphetha ngokuthi crisis kunomthelela kuhlolwe yamanani, kwenza ukuba sibheke izinto ngendlela ehlukile, uma naleli themba kulahleka, okubi ngoba abamele nengxenye enamandla. "Zobugovu" - nje indlela ugqozi okholweni elahlekile namandla umlingisi lomcoka.
Amanani zokuphila: uthando nobungane
Kuyini ekwenzeni "zobugovu"? Guest ababukeli ngokuthi Ikhaya Staging umyalezo - ukuqonda ngokwabo ngokusebenzisa izenzo uzibophezele. namaqhawe Ebanga Usizi ukuthola nokuqaphela yokuthi ingxenye yokuphila kwami ayesevele ehlala. Unganakile iqala ukuhlaziya izenzo izimisele futhi awukabi. Ukulandisa senzeka on the esengozini of ukuphazamiseka kwemizwa, okuyinto osusa utho kuwo abadlali phambili nenani elikhulu amandla.
"Zobugovu" ugxile izinhlobo eziningana. Mhlawumbe lokhu kwenza inhlanganisela ezinhle ukusebenza isikhathi eside ukuze ingaziki. Ngesikhathi nabalingisi abathathi nje ukudlala isigingci, ukucula nokudansa. Ukuze izilaleli ke uhlobo sokukhishwa osusa umthunzi drama. Futhi elinye ithuba ukuze siqiniseke ukuthi abaculi abanamakhono banamakhono zonke.
Heroes uhlangabezana inkinga yokukhula. Kodwa sibonga ingxenye zomculo ukumambula abaculi abayizintandokazi zakho ngesandla engakaze ibonwe wasiza ukusebenza "sobugovu;". Guest ababukeli uthi ukuphindukuzalwa oyingcweti, lapho ayengakulindele. Indlela ukungacabangi ukuthi Karpov nokhahlo ngeke ukudansa samba merry futhi ngingakazi lutho Agapov kuthatha idwala ohlolayo.
Indaba elula mayelana ubunkimbinkimbi ukuphila
Kufinyeta, singasho ngokuqiniseka ukuthi ukukhiqizwa, badayise ukuhamba emizini isiRashiya, kuba ithuba elihle kakhulu lizibuka. Lena indaba mayelana nendlela ezimpilweni zethu zigcwele minutiae ukusungulwa, kuthathwe ngephutha njengesisekelo. Ungesabi ukushintsha into!
Ukusebenza "zobugovu" nge Kotlyarskii (isithombe ukusebenza kusuka emadolobheni ehlukene kuhlanganisiwe) kwenza omuhle umbono izibukeli, owenza indlela yakhe kuze kube lwesikhumba olungabonakali, okushiya a aftertaste eside. Kusahlaziywa kwabo, khuluma ngezinto esihle sokulingisa Ensemble eziyisiprofetho ezazithinta ithalente yehlukene kaningi okubalwa. Futhi umqondo kombhali eyinkimbinkimbi, okuyinto okuhleliwe wonke babhekana. "Zobugovu" - ukudlala ngomuzwa ukuthi ngeke abashiye ubani nandaba!
Drama Theatre (Voronezh): umlando, repertoire, qembu
Alulame idatha elahlekile: algorithm yezenzo
TV-Sony KDL-40W605B: ukubuyekezwa. Imiyalelo, izintengo, izithombe
Indlela yokutshala ikhabe engadini yakhe?
Sizokwazi ukuthi yini esiyiphuphayo, ukuthi uyashada